Soo galooti badan oo shaqo ka helaya Sweden | Somaliska
Soo galooti badan oo shaqo ka helaya Sweden
Sida lagu soo bandhigay macluumaad cusub oo uu soo saaray xafiiska shaqada (Arbetsförmedlingen) waxaa siyaaday tirada dadka soo galootiga ah ee shaqada ka helaya Sweden. Warbixinta ayaa muujisay in ilaa bishii Janaayo iyo Juun ee sanadkaan ay tirada soo galootiga shaqada helay siyaaday 11,200 qof.
Xafiiska shaqada ayaa kororkaan ku macneeyay in Swedishka da’dooda u dhaxayso 16-64 sano ee shaqayn kara ay tiradooda hoos u dhacday, taasoo ay booskoodii buuxiyeen soo galootiga. Ilaa sanadkii 2008 ayaa waxaa suuqa shaqada ka baxay Swedish gaaraya 22 000 qof.
“Tirada dadka shaqayn kara ee dhaladka ah hoos ayay u dhacday. Sidaa darteed shaqooyinka cusub waxaa qaadanaya soo galootiga” ayuu yiri Johan Bissman oo ka tirsan Arbetsförmedlingen.
Baahida ugu badan ee shirkaduhu u qabaan shaqaalaha ayaa laga heli karaa dhismaha, nadaafada iyo daryeelka guryaha. Shirkadahaas ayaa la sheegay in aysan shaqayn karin haddii aan la heli lahayn shaqaalaha soo galootiga ah. Maadaama aysan Swedish badan doonayn in ay qabtaan shaqooyinkaan.
Baahida loo qabo shaqaalaha soo galootiga ah ma ahan shaqooyinka hoose oo keliya balse waxaa baahi weyn loo qabaa shaqaalaha aqoonta sare ee sida Injineerada, dhaqaale yahanada, iyo quburada kombutarada oo hada qaar badan ay shirkaduhu ka soo qaataan India iyo wadamo kale.
Arbetsförmedlingen ayaa sheegtay in heerka shaqada ee soo galootiga uu hada taaganyahay 64% iyadoo kuwa haysta waxbarashada jaamacadaha ay shaqeeyaan 76%.
Dhinaca Soomaalida haddaan eegno ayay sheekadu sidaas ka duwantahay, iyadoo afti ururin hada socota oo aan samaynay sanadkii sadaxeed ay muujinaysa in 41% oo keliya ay Soomaalida Sweden shaqo haystaan ama ganacsi leeyihiin.
Dowlada oo doonaysa in ay xirto iskuulada SFI
Safarkaygii Islaamka: Tayyibah Taylor waxay nabadgalyo ka heshay Islaamka [Video]
Shaafici Somali says:
Asc Dhamaan Aqyaarta!!
waad mahadsan tahey sxb Jimcaale Haqabtirkaaga baahideena sxb waxa imid wadanka mardhow oo gariiga ka soo galey faro malihi Waan isdhiibey ALEM ayaan heysta sidee ku shaqeysan karaa? ama Pratic ku heli karaa? sxb adoo mahadsan migrationsverket waxa ay idhaheen Pratic 1 september ayaan kula soo xariireynaa haddan kuu helno Xage kale ayaan ka heli karaa?Waad mahadsantihiin Waad iga War celin kartaan Qofkii macluumaad hayo…
July 29, 2015 at 17:40
aniiga ahaan Arbetsförmedlingen ma aamisani inna ee qof shaqo siiso waayo aniiga swedan waxa jooga 6 sano waligeey Arbetsförmedlingen shaqo ima sinin inta aan wadanka joogane 2 sano ama jal sano iyo bar aan shaqo laan ahaayo hadii aa leedahay utbildning swedan shaqo waa ka heleesa wali Arbetsförmedlingen waxa ka aamisanahay inna ee yahiin kuwa doolada hoose lacag been ah ka cunaan
waa fikir keega oo kaliya waa ku saxanaan kara waana ku qaladanaan kara mahad sanadiin somaliska.com
July 31, 2015 at 05:13
Waa macquul lkn weli waxbaa dhiman